Fifidianana: Tsy ilaina ny fifampiantsiana sy ny herisetra
jeudi, 27 décembre 2018 11:36
Eo ampiandrasana ny vokam-pifidianana dia mihenjana ny tady eo amin'ny rehetra.
Raha ny lalàna dia manana 7 andro ianareo CENI, aorian'ny nandraisana ny vokatra farany avy any amin'ny ratsamangaika isan-tsokajiny.
Raha ny 25 desambra 2018 no farany nandraisanareo izany vokatra farany izany, araka ny fetr'andro napetrakareo, dia mbola manana hatrany amin'ny 1 janoary 2019 izany ianareo ny amoahanareo ny vokam-pifidianana vonjy maika.
Marina fa mety efa vitanareo avokoa ny kajy, niainga tamin'ireo PV scanné nalefa mail taminareo. Neken'ny HCC, ary nekenareo anefa ny hanaovana fampitahana ireo vokatra rehetra isaky ny biraom-pifidianana, hatrehan'ireo solotenan'ny Kandida. Eo amperin'asa tanteraka izy ireo ankehitriny.
Ny asanareo CENI, tsy ny hoe hanao kajy fotsiny, fa hitady ny marina sy ampisinda ny ahiahy rehetra ihany koa, hisian'ny fitokisan'ny rehetra ny vokam-pifidianana, ka ampitony na ny resy, na ny mpandresy hihavanan'ny Malagasy rehetra.
Tsy filam-boatsiary akory ny antony angatahana anareo tsy ho maika, satria fantatra tsara, fa 2 andro aorian'ny famoahanareo vokatra vonjy maika, no tsy maintsy ametrahana ny fitoriana eo anivon'ny HCC, ka raha maika ianareo hilaza ny vokatra, dia toa midika ve izany fa tsy omenareo fotoana ireo mahatsiaro tena fa tsy marina ny fifidianana, ka tsy omenareo fotoana ahita ny marina? Satria tsy hanam-potoana hametraka ireo fitoriana any amin'ny HCC izy ireo, satria tsy vita 2 andro ny fanamarinana ireo bileta izay feno hosoka ny maro.
Aoka tsy ho avy aminareo CENI, sanatria no anosika ny hafa hanohitra ny vokatra avoakan'ny HCC, izay manana 9 andro aorian'ny famoahanareo vokatra vonjy maika, hilazany ny voka-pifidianana raikitra, tsy azo ivalozana.
Tsy mandika lalàna akory ianareo raha miandry ny fahavitan'izany fanamarinana rehetra izany, satria amin'ny 1 janoary 2019 ny fetra omenan'ny lalàna anareo.
Fantatra fa vato mafana ny eo an-tananareo, ka mety alaim-panahy ianareo anipy izany vato izany any amin'ny HCC. Tsy mahasoa antsika anefa izany, satria ahatsiaro tena ny hafa fa tsy nomena fotoana, izay ao anatin'ny lalàna tanteraka hiala nenina amin'ny fikatsahana ny marina.
Tsy misy resaka tsy mahatanty resy akory izany, fa soa ho an'ny rehetra ny mahazo Filoha mandresy ao anatin'ny fahamarinana tanteraka, Filoha hiaraha-manana satria samy hiara-honina eto hatrany na ny resy na ny mpandresy.
Manentana ny rehetra tsy hifampihantsy, na samy miezaka ny hijoro amin'ny marina aza. Tombotsoan'izay lany eo no hisy fitoniana, hisy voka-pifidianana eken'ny rehetra, manakaiky indrindra ny marina.
Ny Antoko "Vitantsika io", dia miantso hatrany ny fampihavanam-pirenena, ny tsy hisian'ny korontana, na fampiasan-kery. Mitandro hatrany sy miantso ny rehetra hanaja ny ara-dalàna ary manaja izay Filoham-pirenena lany eo.
(Sary nindramina, Bileta marobe izay olona iray no nifidy taminy)